Faucet yegumbi lokuhlambela 4 Inch Centerset Brush Nickel
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Ibhulashi yeNickel Igumbi lokuhlambela ngombhobho
ikaliwe 4.91 Kwi-5 esekelwe kuyo 35 amanqaku umthengi
(35 ncomo ngumthengi)
Igumbi lokuhlambela lokuhlambela iBarch eyiNickel yeWOWOW iyindleko-ayisebenzi. Imveliso ekumgangatho ophezulu kunye nesitayile esenziwe ngoku. Ivenkile yethu yokuhlambela ifenitshala yokuTofa ifakwe iNickel ngoku!
2321200 imiyalelo yokufaka
Isikhuseli sokuhlambela sine-nickel 2321200
Ngaba ukulungele isitayile okanye ukuqala kwakhona kwigumbi lakho lokuhlambela? Ku-WOWOW sikholelwa ukuba uyilo okanye ukuhlela ngokutsha igumbi lokuhlambela kufuneka kwenziwe ngezixhobo ezisemgangathweni ezisemgangathweni ofanelekileyo. Kwaye oku kuya kufaneleka kuye nakubani na. Ukuhombisa okanye ukuhlaziya igumbi lakho lokuhlambela ngamaxesha amaninzi ayisisi sigameko sexabiso eliphantsi. Kwaye ngenxa yezizathu zohlahlo-lwabiwo mali okanye ukunqumama okungakhange kucingelwe, umntu unokukhangela iifayile zexabiso eliphantsi njengokophelelwe lihlahlo-lwabiwo mali. Ku-WOWOW siyakuqonda oku, kwaye ke ndenza ukuba ndikwazi ukuthenga i-faucets ephezulu yentengiso ngexabiso eliphantsi. Ngaba oko kuvakala kungakholelwa? Hayi xa ufunda ngathi kunye neemveliso zethu.
I-WOWOW luphawu olutsha, ngokuvelisa ukuhambisa okunemibhobho njengezitshizi. Ukudibanisa zonke iintlobo zoyilo kunye nezitayile, i-WOWOW ihlala inikezela ukhetho olubanzi lweelizefit ezisemgangatho ukuhambelana nemfuno yabo bonke abathengi bethu. Kwaye njengokuba ubona kwipotifoliyo yeWOWOW, siqeshe abaqulunqi abahamba phambili ukuba bakunike izinto zokuhlamba eziza kulunga nakuphi na imagazini yoyilo. Siyakholelwa ukuba i-WOWOW ikunika eyona yeyona nto iphambili kumgangatho wentengiso kunye neefenisi zethu zoyilo oluphambili, iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kodwa ngamaxabiso afikelelekayo.
Isikhuseli sangokuhlwa igumbi lokuhlambela eligutyungelweyo
Le faucet yokuhlambela yangasekuqaleni kunye nexesha langoku eline-nickel ye-WOWOW ineempawu zokubamba zamanzi ezimbini, enye inamanzi afudumeleyo kwaye enye ngamanzi abandayo. Olu luyilo lwe-retro lukhanyisa igumbi lakho lokucoca ngombala okhethekileyo. Njengoko unokwazi, iifestile zegumbi lokuhlambela ziindawo zendalo ekugxilwe kuzo, nangona zizezona zincinci izinto zokuhlamba. Ngesi sizathu unakho ukunika uthango olukhethekileyo lwe-retro kwigumbi lokuhlambela, kwaye ungagungqi ekusebenzeni nakumgangatho. Le faucet yegumbi lokuhlambela igreyiti elula ukudibanisa nezinye izitshizi zegumbi lokuhlambela leWOWOW ezifumaneka ngohlobo olufanayo kwaye zigqitywa njengale nqanawa yokuhlambela igreyiti edityanisiweyo.
Ukugqitywa kwe-nickel egqityiweyo yenziwa nge-nickel coating egqityiweyo ngokuyifaka ngebrashi yokucofa. Esi sesona sizathu sokuba le faucet yegumbi lokuhlambela ifakwe i-nickel ifumane ukujonga kwayo okubhaliweyo. Ukugqitywa kwe-nickel okugqityiweyo kunika le faucet yokuhlambela ithoni efudumeleyo neyodwa. Ngaphandle koko, iyila imbonakalo ekhethekileyo kunye nokuhluka kwayo kokukhanya kunye nezithunzi kumphezulu wale faucet yegumbi lokuhlambela. Ngenxa yempawu zayo ezizodwa ze-WOWOW igumbi lokuhlambela eline-nickel ayinakuphuma ndawo kuyo nayiphi na ihotele yeenkwenkwezi ezintlanu okanye izindlu ezizodwa.
Isikhuselo sokuhlambela sokuqala ngenqanaba lokuqala si-nickel
Ngokukhawuleza uqaphela umgangatho wale faucet yokuhlambela xa unayo ezandleni zakho. Akukho nto icaphukisayo kunokuba ufake ifenetti yokuhlambela entsha eqalisa ukuphamba emva kwexesha elifutshane. Oku kuvakala kunokukwenza uphambane, ngakumbi ebusuku. Emva koko akusekho esinye isisombululo ngaphandle kokutshintsha isitofu sakho sokuhlambela. Oko kunokuba ngumsitho weendleko, kwaye isitofu sakho sokuhlambela esinexabiso eliphantsi saye safumanisa ukuba asibizi kangako ekugqibeleni. Kwi-WOWOW ufunda kwelinye icala ukuba iimveliso ezisemgangathweni eziphezulu azithethi ukuba zibizwe ngamaxabiso aphezulu. I-Wowow iqinisekisa ukuba ungafumana umgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo. Eli gumbi lokuhlambela eligutyungelweyo linikezela ngesiseko esikhulu sobhedu, iqokobhe lentsimbi engenasiseko kunye nolwakhiwo oluzinzileyo. Ukuqina kuyinjongo ephambili xa le faucet yokuhlambela yenziwa nickel ye-WOWOW yenziwa. Kwaye yile nto uya kuqaphela kwangoko.
Yonke itephu yendawo yokuhlambela yeWOWOW yegumbi lokuhlambela elenziwe ngesinyithi yenziwa ngobhedu. Le faucet yegumbi lokuhlambela eyenziwe ngesandla ayisiyonto i-cUPC- kunye ne-NSF-eqinisekisiweyo. Isitya sokuhlambela esinegumbi lokuhlambela eline-nickel ye-WOWOW inomjelo ocacileyo wesiplashfree. Ngaphandle koko, awuyi kuqaphela naziphi na iiprinta zeminwe phezu kweli gumbi lokuhlambela. Kulula ukucoca kwaye ke kulula ukuyigcina. Ngale ndlela uya kuba nesipanela sokuhlambela esine-nickel yokugezela ixesha elide.
Isikhuselo sokuhlambela esisebenza ngexabiso elifanelekileyo
Igumbi lokuhlambela le-WowOW igumbi lokuhlambela eligqityiweyo lagqitywa kunye nobuchwephesha bobugcisa bokubonelela ngomtsalane wexesha kunye nokunyamezela. Kwaye konke oku ngexabiso elifikelelekayo. Ngaphezulu kwayo yonke into, i-ABS-aerator ikusindisa amanzi nge-50%, ke uya kuyibona le nto kwityala lakho lamanzi. I-WOWOW ke iyanceda ukuba ugcine ngeendlela ezininzi.
Ngaphandle kwexabiso elinomtsalane kunye neempawu zokonga amanzi, eli phenyane lokuhlambela eligcinwe nickel nalo kulula ukulifaka. Le faucet ye-intshi ezi-4 ze-intshi ingafakelwa isitya sokuhlambela esinemigangatho emi-3. Esi sitayile sokuhlambela senziwe isitayile sokuhlamba kwigumbi lokuhlambela sibandakanya isithuba sokumisa pop. Zonke izinto zokufaka ziyabandakanywa kunye nepheyile. Le nqanawa yokuhlamba igutyungelwe ngokulula ifakwe ngemiyalelo ecacileyo yokufakelwa. Nokuba awuyongcali. Ngale ndlela ungagcina iindleko ezingaphezulu.
Ukuhanjiswa simahla kunye nokubuya kwemali kwiintsuku ezingama-90
Njengoko i-WOWOW imele iimveliso zayo kwaye iqinisekile ngomgangatho weef fairets zayo, ixesha lesiqinisekiso seminyaka emi-3 linikezelwa ngale ndawo yokuhlambela ifenitshala yokuhlambela ingene nickel. Ukuba isitya sokuhlambela esine-nickel ye-nickel ye-WOWOW ayinakuze isebenze njengoko uthembisile, uya kufumana isitya sokuhlambela esincinci esincinci ngaphandle kwengxaki.
Ngaphandle koko, i-WOWOW ikunika isiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-90. Xa ucinga ukuba asikunikanga oko sikunikileyo, ungathumela isitofu sakho sokuhlambela ukuba sibuyele kuthi ngaphandle kwemibuzo ebuzwe. I-Wowow imele ukugcina izithembiso zayo, kwaye ukuba awunayo loo mvakalelo, siyakuthatha uxanduva lwethu ngenxa yoko. Nje ukuba sifumane igumbi lokuhlambela eline-nickel ngasemva, uya kuyibuyisa ngokukhawuleza imali yakho!
Njengazo zonke iimveliso zeWWOWOW, le faucet igumbi lokuhlambela liza kuthunyelwa simahla nakweyiphi na indawo emhlabeni. I-WOWOW inabaphulaphuli ngokubanzi kwihlabathi liphela kwaye bonke bayayixabisa indlela yexabiso eliphantsi ye-WOWOW ekufuneka inikezele. Sinqwenela ukuba nawe uzame imveliso yethu. Kwaye siqinisekile ukuba awusoze ufune ukutshintsha uye kwenye ifoji.
Izibonelelo zesitya sokuhlamba isitovu sokuhlambela esine-Nickel ngendlela engezantsi:
Uyilo lweklasikhi kodwa okwangoku
 Ukugqitywa kwezandla okudityaniswa ngesandla
 Kulula ukudibanisa kunye nezinye izitayile zangasese
Indawo yokusebenza ephezulu yokuhlambela kwigumbi lokuhlambela
I-SKU: 2321200 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: 4 intshi, Uqhekeze uNickel, Ukwahlula Ukuphatha
9 x 2.2 x 5.1 intshi
I-NSF yodongwe ivalve yediski, xuba amanzi, imingxuma emi-3 kuyo. Uyilo lweziko, kulula ukuyifaka
Idesika inyusiweyo, ukufakwa kwemingxunya emi-3 nge-intshi yeziko
Ukulawulwa kwamanzi ashushu kunye nokubanda
Faucet * 1, Ufakelo iinkcukacha * 1, Pop-up Drain Stopper * 1
Ngokuchanekileyo isinki endiyifunayo. Ndaya kwiivenkile ezimbalwa andafumana nto ndiyithandayo. Oku kwakulula kakhulu ukuyifaka, kwaye iza nayo yonke into oyifunayo kubandakanya iziqhoboshelo zombhobho kunye nomsele. Ukucoca ngokulula, kubambe kakuhle ebantwaneni, akunakubuza okungakumbi.
Le tephu entle ekhangeleka iza namanye amalungu ebesiwadinga kunokuba besikulindele. Khange sinyanzeleke ukuba siye evenkileni siyokuthenga izinto eziphantsi kwesinki ngamanye amaxesha ezingafikeleli kumbhobho. Silixabisile ixabiso lale nto. Sivakalelwa ngathi sifumene okuhle.
Ndithenge le nto ndikhangela into ngexabiso eliphantsi. Ndamangaliswa yindlela esindayo kwaye esemgangathweni ophakamileyo xa ndavula. Zibukeka zintle, kunye neqhezu leendleko zeempawu eziphambili.
kundithathe iiyure ezimbini ukungafaki iipompo zangasese ezimbini ezindala. Le yenzelwe ngcono, ayisiyi kuphela ukuba ndingayifaka kwi ~ 2 min, kodwa ndiyakholelwa ukuba ndingayifaka ngaphantsi kwemizuzu eli-10 xa kufuneka kwixesha elizayo. Ngokwenene bendizibuza ukuba kutheni iimpompo ezindala kufuneka ziyilelwe nzima ukususwa.
Ndonwabile kakhulu yile faucet. Inzima, iphatha kakuhle, ukuhamba kakuhle kwamanzi kwaye ziimpompo ezisemgangathweni. Ndandinomdla, hayi uphawu oluqhelekileyo endilubonayo ukuba ndichukumisekile. Ngokuqinisekileyo uya kuthenga olu hlobo kwakhona.
Igumbi lokuhlambela elimangalisayo lokuhambisa amanzi ngepompo. Yonke into ibandakanyiwe ukwenza ukufakwa kube lula. Yithande inkangeleko kwaye uzive ngepompo yam entsha!
Le faucet yayiyeyona nto bendiyikhangela ngelixa ndicwangcisa iinguqulelo zangasese. Ndiyithandile kakhulu kwinkosi yethu yokuhlamba kangangokuba ndiyithengile kwakhona ephambili. Icocekile kwaye inesitayile. Kwaye ixabiso lilungile. Igqithile kulindelo lwam
Imveliso egqwesileyo, ijongeka intle kwaye kulula ukuyifaka. Ukupakisha kwakulungile, kukhusela imveliso. Ndiyithanda kakhulu itompu yenqanaba eliphezulu ukuze ube nokufumana lula izandla phantsi. Ukugqiba okuhle kakhulu, kwakhiwe ngokuqinileyo.
Intambo entle kakhulu yokuhambisa amanzi kunye nee-accesories ezixakeke nazo. Izinto zokuhombisa zokuhombisa zilungile, zinde (i-20 kunye kunye) kunye nomsebenzi onzima, kwaye idreyini nayo iluncedo ngokudibeneyo!
Ndonwabe kakhulu ngale nto ndiyithengayo, itepu ibonakala intle kwaye iziva iqinile ngexabiso. Ngaphezulu koku ufumana imigca eguqukayo eyayikumgangatho oqinileyo… .KODWA YIMA! ayisiyiyo yonke loo nto, ufumana ivalve pop-up yohlobo ekulula ukubeka kulo, kulula ukuyisebenzisa kwaye ijongeka intle nayo. Akho kuzisola.
Siyithandile le faucet. Yazaliswa ngokuntywila kunye nokufakwa kweendawo zokucoca amanzi. Ndingayala kwakhona le mveliso kwakhona
ewe *** m2020-05-19
Oku kuyinto entle kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Iza nayo yonke into oyifunayo. Kuthathwe imizuzu embalwa ukuyifaka kwaye ijongeka kwaye isebenza kakuhle. Ndiza kuthenga enye.
Kungenxa yokuba isipompo esasikho sombhobho wokuqubha sasikufutshane nekhawuntari kwaye amanzi atshiza avela kwisinki. Ndithengile eli qhekeza. Imnandi kakhulu kunaleyo ifike kwikampu yethu kwaye iya kufaneleka ukuba isetyenziswe endlwini yethu. Uyonwabile ngale ntengo.
Ixabiso elihle kwaye lihle. Kulula ukuphatha. Yithande ivelufa yokutyhala. Khange ndibenako nokwazi ngokuza nayo.
Le faucet isebenze kakuhle kwaye ngexabiso elingcono kakhulu kunayo nayiphi na ivenkile ekufutshane nam. Kwakulula ukuyifaka kwaye ijongeka intle.
Ndonwabile ukuyifumana le ngexabiso elikhulu kangaka. Umgangatho uhambelana nexabiso kodwa usebenza kakuhle kwigumbi lokuhlambela lomntwana wethu.
Ukuba ndingabawela esinkini kwaye ndiziva amandla asemva kwale faucet ndingaya. Ndivakalelwa ngathi izandla zam zibhaptizwa ngalo lonke ixesha amanzi avela kulo Thixo athumele itompu.
Sifake ezi-2 kwezi nyanga zimbini zidlulileyo ..
Zoyikeka! Zintle kakhulu kwaye zixabiseke kakhulu !!
Ndithengile iiseti ezintathu zezi seti zompompo wokuntywila. Ndingachitha ixesha elininzi kabini kodwa ndingenayo kuhlahlo-lwabiwo mali. Ezi zizinto ezintle kakhulu kwaye zibukeka zintle. Ndinofakelo lwemibhobho yobungcali kwaye wathi zizezona iiseti zibalaseleyo azibonileyo. Ndingacebisa kakhulu.
Ndisebenzise ezi ukuphucula izindlu zangasese. Zilula ukufaka kwaye zisebenze ngokutyibilikayo. Ndiyayithanda indlela elungileyo abasebenza ngayo
Eyona mpompo yokuhlambela ndiyithengileyo! Ixabiso elimangalisayo, ukujonga okulula kwesitayile, kusebenza kakuhle!
imveliso enkulu. ukuba ufuna enye kamva ngokuqinisekileyo iya kuthenga enye kwaye iyifake ikhangeleke intle.
Umbhobho omkhulu wokubuyisela igumbi lokuhlambela elingaphantsi. Ukufakwa ngokulula, kwaye isebenza ngaphandle kwezithintelo. Ukujonga ukuthenga okufanayo kwigumbi eliphezulu lokuhlambela ngokulandelayo.
Bekungafuneki ndithenge enye into yokutshintsha ipompo yam yokuthambisa. Jonga kakuhle. Ixabiso elifanelekileyo.
Umgangatho kunye nexabiso # 1 ngale nto. Ukufakwa okulula kakhulu kunye nayo yonke into oyifunayo xa ufaka kwibhokisi. Awungekhe uyibethe naphina.
Sathenga ezi-3 kwezi zozibini izindlu zethu zokuhlambela. Ndiyayithanda indawo yokumisa amanzi. Ngamaqhosha vs isikulufu kwinto. Yenza ibonakale icoceke kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ngokubanzi, uyilo olucekeceke nolwenziwayo.
Ifakwe malunga nemizuzu engama-30. Ukuphucula ukusuka kwindala kwaye bekuyinto entle yokwenza igumbi lethu lokuhlambela libe langoku
Uthande isitayile kunye nokugqitywa kwe-nickel. Kulula ukuyifaka. Ndineendawo zokuhlambela ezintathu kwaye ndinayo le faucet kuzo zonke.
Kuthengiwe oku ukubuyisela kunye nompompo omdala kwigumbi lokuhlambela elingasetyenziswanga kunqabile. Iza nayo yonke into endiyifunayo kulo msebenzi. Ndichukumisekile ngumgangatho wale faucet.
Imveliso elungileyo kakhulu! Ndamangaliswa yindlela eyenziwe kakuhle ngayo. Ndiza kuthenga enye kwakhona kwenye indlu yangasese.
Nditshintshe zombini i-master bath facet kwaye ibingumoya. Kulula ukuyifaka kwaye ijongeka intle kwaye ngeli xabiso ndiza kutshintsha namanye amagumbi okuhlambela.
Kulula ukuyifaka, yeyangoku, kwaye ayibizi. Ijongeka intle kwigumbi lokuhlambela elinesiqingatha.
Ixabiso elikhulu libukeka libiza kwaye lisebenza kakuhle. Ixabiso lokwenyani lemali ndingakucebisa oku ukuba ufuna itompu entsha okanye ujonge nje ukuphucula
Sasifuna itompu yokutshatisa ishawa yethu kwaye iivenkile zethu zasekuhlaleni zazingenayo into esiyithandayo. Le faucet isebenza ngokugqibeleleyo! Kulula ukuyifaka kunye nokujonga okuphezulu
Ndithenge enye yezi mpompo kwaye ndayithanda kakhulu ndathenga ezinye ezimbini zam kwezinye izindlu zangasese. Yayibiza ixabiso elifanelekileyo kwaye yacoca indawo zam zokuhlambela! Imveliso ifike ngokukhawuleza kwaye ikwimo entle. Impompo emangalisayo Ndikucebisa kakhulu le faucet!
Ixabiso lalilungile kwaye kwakulula ukufaka. Ndonwabile kakhulu yindlela esebenza ngayo kwaye ijongeka intle. Impompo elungileyo kwaye ijongeka ilungile. Ukufaka okulula okulula